karemy – Trinitera Malagasy
Catégorie : karemy
Izaia 52, 13-53, 12/ Salamo 30/ Hebrio 4, 14-16; 5, 7-9/ Md Joany 18, 1-40;19, 1-45 Tsy lalana mankany amin’ny fahafatesana ny lalan’ny hazofijaliana fa lalana mankany amin’ny voninahitra, mankany amin’ny fandresena. Tsy ny fijaliana hampietsi-po no tian’ny litorjia sy…
Izaia 50, 4-9a/ Salamo 68/ Md Matio 26, 14-25 Ny vakiteny voalohany dia manohy ny fikaloana an’ilay Mpanompon’YHWH amin’ny tonokalo fahatelo (efa novakiana tamin’ny Alahady). Amin’ny teniny no ankaherezan’ilay mpanompo an’izay reraka. Tsy teniteny foana anefa fa teny ianarana tsara…
Izaia 50, 4-7 Sal 21 Fil 2, 6-11 Md Lioka 22, 14 – 23, 56 Passio Efa mahazatra antsika loatra ny mankalaza ny Herinandro Masina. Kinga ery ny ankizy sy ny mpanentana mizara ny andraikitra hotanterahina, dia samy manatanteraka izany…
Vakiteny I : Ezekiela 37,21-28, Tononkira : Jeremia 31,10.11-12ab.13, Evanjely : Md Joany 11,45-56. “Ny lehiben’ny Mpisorona sy ny Farisiana tamin’izay dia efa nandidy fa izay mahita ny itoeran’i Jesoa dia tsy maintsy milaza, mba hisamborany Azy” (and. 57). Toy izany no fiafaran’ny…
Vakiteny I : Jeremia 20,10-13, Salamo 18 (17) 2-3a.3bc-4.5-6.7, Evanjely : Md Joany 10,31-42. Miverimberina ao amin’i Jeremia ny fanankinana ny zavatra rehetra (ady) amin’Andriamanitra izay mamantatra ny voa, (כִּלְיָה kil’yah, siège de l’emotion et d’affection: ny fietseham-po) sy ny fo (לֵב…
Vakiteny I : Jenezy 17,3-9, Salamo 105 (104), 4-5.6-7.8-9, Evanjely : Md Joany 8,51-59. Tsy manirery isika mizotra mankany amin’ny Paka fa miara-mizotra (syn-odos) ary tohanan’ny Fiangonana manontolo, ka manovo harena avy amin’ny traikefan’ireo efa nialoha lalana antsika tamin’ny finoana. Razambentsika mpino…
Vakiteny I : Daniely 3,14-20.91-92.95, Tononkira : Daniely 3,52.53.54.55.56, Evanjely : Md Joany 8,31-42. Ny tantaran’ireo telolahy ao amin’ny Bokin’i Daniely (דָּנִיֵּאל Daniye’l, Andriamanitra no mpitsara) dia manambara ny fanirian’ny olombelona mba havotan’Andriamanitra manoloana ny fitsarana tsy marina, satria Izy no hany Mpitsara…